२४ घण्टाभित्र हाजिर नभए कारवाही ! – Makalukhabar.com
२४ घण्टाभित्र हाजिर नभए कारवाही !
काठमाडौ, चैत १९ । शिक्षा मन्त्रालयले काजमा खटाईएका आफ्ना कर्मचारीलाई २४ घण्टाभित्र हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ । अन्यथा कर्मचारीहरुमाथि कारवाही हुने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत प्रदेशका अन्य मन्त्रालय र स्थानीय निकायमा काजमा गएका कर्मचारीलाई यस्तो चेतावनी दिइएको हो ।
शिक्षा विभागका प्रवक्ता एवं उपनिर्देशक केशव दाहालले हालसम्म करिब ४ सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइसकेको र केहीले कनिष्ठको मातहतमा काम गर्न नसक्ने जनाउँदै फिर्ता आएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयले भने कुनै पनि बहानामा काजमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता नहुने बताउँदै खटाइएको निकायमा जानुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनले वरिष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारीको विषयमा छलफल भइरहेको बताए।
रमाना लिई खटिएका ठाउँमा नगएका र रमना लिन नमानेका कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयमा पठाई कारबाही अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले यसअघि सूचना जारी गर्दा पनि कर्मचारीले रमाना लिएका थिएनन्।